Ma ubaahantahay inaad soo celiso dahabka
gem.agency waxay fududeyneysaa fududeynta. Waxaan ku dadaalnaa sidii aan ugu qanacsanahay macaamilka. Haddii maalmaha 30 ee helitaanka dhagaxaaga (yaasha) aad ku qanacsan tahay amarkaaga, waxaad nooga soo celin kartaa xaalad asalka ah iyo mid aan macquul ahayn. Gems waxaa laga yaabaa in lagu soo celiyo oo keliya xilliga baaritaanka 30.
Fadlan Email GEMIC u dir a Return Authorization Number (orday) Iyo Tilmaamaha noqo dheeraad ah. FG: Amarka laabtay noo aan orday la diiday doonaa oo ku soo laabtay diraha. Baakadaha iyo maraakiibta ku soo noqo lacagta waxaa mas'uul ka ah diraha. All iibka waa final 30 maalmood ka dib (waxyaabaha ku soo laabtay waa in boostada maalmood 30 taariikhda amarka gudahood lagu helay).
Warbixin dheeraad ah: In wadamo badan, sheegay shixnadaha laga yaabaa in lacagta caadooyinka lagu dabaqi karo iyo canshuuraha. Buyers ayaa ka masuul ah wax kasta oo caadooyinka, canshuurta iyo waajibaadka lagu leeyahay. Dib dhigay sababo la midbaa mid aan la oggolaan karin.
Su'aalo More? Nala soo xiriir
Amaanka & Privacy
GEMIC wuxuu ka walaacsan yahay badbaadada iyo amniga macaamiisheena. Waxaan hubinaa in hanaankayaga macaamilku uu aad amaan yahay iyo in macluumaadka macaamiisheena uu yahay mid sugan.
GEMIC waxay ixtiraamtaa macluumaadka shakhsiyeed boggeeda. Cinwaanka emaylkaaga waxaa loo isticmaali karaa si ku meel gaadh ah si loo abuuro emayl ama amar.
GEMIC waxay isticmaashaa cookies cookies si ay kor ugu qaaddo booqashadaada una suurtageliso gaadhigayaga wax iibsiga ee internetka. Macluumaadka shaqsiyeed laguma keydinayo cookies. Kukiyada waa in loo suurta galiyaa marin u helida dhamaan astaamaha boggeena. Wixii su'aalo dheeraad ah fadlan nala soo xidhiidh.
Waxaad dalban karaa shahaadada markii aad ku dari shay aad gaadhigii. Si arrintan loo sameeyo, riix link "Ku dar shahaadada dahabka ee shaygan" bogga faahfaahsan sheyga kor ku xusan ee Ku dar gaadhiga ' button. Tani furi doonaa fursadaha shahaadada.
Dhamaan baraagaha ku jira GEMIC waxaa loo dammaanad qaaday inay noqdaan sida la sheegay. Shaqaalahayaga khibradda leh waxay si taxaddar leh u baaraan oo u cabbiraan miis kasta
Qurux kasta oo ka soo baxda Shaybaarka GEMIC waa qurux qaali ah oo Dunidu abuuray. Kama hawl-gasho qaab isku-dubarid ah ama shaybaar-abuuray "qurxin".
Options Payment iyo Siyaasadaha
Hubinta-baxay waa amaan, amni iyo fudud la GEMIC Laboratory. Waxaan ku siin soo socda hababka lacag bixinta dabacsan ee dhamaystirka aad si:
Bixi by credit card via PayPal (ma account PayPal loo baahan yahay) PayPal aqbalaa Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, Euro Card, Maestro iyo American Express. macluumaadka ammaanka PayPal.
Bixi la xisaabtaada PayPal Annagu waannu xubin PayPal xaqiijin. Fiiro gaar ah: Haddii aadan ku leedahay xisaabta aad, aad si fudud u furan kartaa koonto cusub adigoo raacaya tilmaamaha ku-screen on.
Bixi by iibsiga Western Union Marka ay kala iibsiga Western Union bixinta, waxyaabaha aad loo hayo doonaa muddo saddex maalmood ah. Fadlan noo email tirada gaar ah lacag macaamil ganacsi (MTN #) si aad u kala iibsiga. Marka lacag ah ayaa lagu helay, waxaan ka shaqayn doonta si. Fiiro gaar ah: lacagta Transfer waa in aan laga jaro xaddiga helay.
Bixi by kala iibsiga bangiga tooska ah Marka ay kala iibsiga bangiga tooska ah bixinta, waxyaabaha aad loo hayo doonaa muddo saddex maalmood ah. Fadlan noo email code bangiga tixraaca kala iibsiga marka aad bilowday bixinta. Marka lacag ah ayaa lagu helay, waxaan ka shaqayn doonta si. Fiiro gaar ah: lacagta Transfer waa in aan laga jaro xaddiga helay.
Markaad diyaar u tahay inaad baartid:
Dib u eeg gaarigaaga wax iibsiga oo xulo habka rarkaaga. (Kaliya FeDex waa la heli karaa inta lagu jiro xiisadda Covid-19.)
Guji “sii wad bar-tilmaameedka” oo geli cinwaanka rarkaaga.
Xulo habka lacag bixintaada oo dhagsii “hadda bixi”.
Gali macluumaadkaaga biil, ama ku daabac tilmaamaha shaashadda ee xawaaladaha. Mar alla markii amarkaaga si guul leh lagu meeleeyo, waxaad naga heli doontaa xaqiijin email ah at [Email ilaaliyo] Fiiro gaar ah: Fadlan hubso inaad kudarto “[Email ilaaliyo]Liiskaaga cinwaanka e-mayl ee aaminka ah si loo hubiyo inaad heli karto emayl-keenayaga iyo amarrada xaqiijinta hubinta. Haddii aadan naga helin wax e-mayl ah, fadlan hubi inaad hubiso spamaga ama galka emailka qashinka. lacagta Kaarka amaahda iyo lacagaha PayPal waxaa lagu soo dallacayaa lacag kasta. Lacag bixinta iyada oo loo marayo Western Union ama wareejinta bangiga waa in lagu diraa oo kaliya US dollars. Markaad xulaneyso lacag aan ahayn Doolarka Mareykanka, sicirka sarrifka ee maanta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu beddelo qiimaha la muujiyey. PayPal iyo bangigaaga wax soosaara (bangiga soo saara kaarka amaahda) waxay isticmaali doonaan sicirkooda sarrifka ah si ay ugu beddelaan lacagaha, sidaas darteed, lacagaha ku jira lacagta aad dooratay waxyar ayey ka duwanaan doonaan qiimaha ka muuqda lacagtaas boggayaga. GEMIC waxay kaa qaadi doontaa oo keliya lacagta la muujiyey. Lacag kasta oo dheeri ah oo dheeri ah waxay ku saleysan tahay tan PayPal, kaarkaaga deynta ee soo saaraya siyaasadaha bangiga ama Western Union.
Rar Bixin Bilaash ah - Qaddarka ugu yar ee dalabka: 50 $ (Kaliya FeDex ayaa la heli karaa inta lagu jiro xiisadda Covid-19.)
Xawaaladaha Express waxay caadiyan qaadataa 3 maalmood in lagu soo qaado waxaana lagu raadinkaraa khadka tooska ah ee tallaabo kasta oo loo maro. Baarayaasha ayaa si buuxda u caymis leh. Saxeex ayaa loo baahan yahay marka la keeno. Gaarsiintu waa Isniinta ilaa Jimcaha inta badan waddamada. Ma jiraan sanduuqyada PO (marka laga reebo UAE, Saudi Arabia iyo Kuwait), cinwaannada APO ama FPO lama isticmaali karo. Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay 'saxiixa feylka', fadlan wac FeDex si aad ugala noqoto oggolaanshahan. Xirmooyinka la keenayo iyada oo aan la saxiixin, sababtoo ah 'saxiixa feylka' ma dabooli karo sideheena caymiska.
Helitaanka Dhamaan waxyaabaha qurxoon ee loo muujiyey inay yihiin 'la heli karo' waxay ku jiraan diyaarna u yihiin dhoofis deg deg ah. Amarada waxaa lagu socodsiinayaa 1 maalin shaqo gudahood Isniinta - Jimcaha (marka laga reebo ciidaha). Warbixin dheeraad ah: Wadamo badan ayaa sida saxda ah loogu sheegay shixnadaha waxaa saaran khidmadaha kastamka iyo canshuurta. Waraaqaha diiwaangashan ayaa qaata waqti dheer, laakiin caadi ahaan waxay ka fogaataa khidmadaha dheeraadka ah Waxaan ku faraxsanahay inaan u rarno hadiyad ahaan, laakiin fadlan la soco in aanaan xakameyn karin khidmadaha dheeraadka ah ee ka dhici kara dalkaaga. Fiiro gaar ah: canshuurta Import ama waajib waa mas'uuliyad iibsadaha ee. shixnadaha celiyay in la diiday sababtoo ah eedeeyay sida aan la aqbali karin. Waxaad nala soo xiriiri kartaa haddii aad u baahan tahay wax qorshe khaas ah. Biilasha Dhammaan xirmooyinka ka socda GEMIC waxaa ku jira qaansheeg buuxa. Fadlan nala soo xiriir hordhigtay inta aad si haddii aad u baahan tahay qaansheegta a kartoo ama qaansheegta ma at dhan.
Miisaanka leh midabo gemstone Hufnaan
IF : Loupe nadiif ah - gudaha gudeheeda; bilaash ah ku darista
VVS : Ku dhowaad loupe nadiif ah - aad iyo aad u yar ayaa loo baahan yahay; ku lug leh si muuqata looma arkin wax ka weyn 10x.
VS : Isha nadiifka ah - nabaro aad u yar; wax yar oo kooban ayaa laga arki karaa indhaha tababbaran ama weyneynta 10x ka yar.
SI : Wax xoogaa ka mid ah - ku daris yar ayaa lagu arki karaa isha qaawan.
I : Waxaa ka mid ah - ka-soo-gelinta waxa lagu arki karaa indhaha qaawan.
AED: Imaaraadka Imaaraadka Carabta dirham (d.irka) AFN: Afghan afghani (؋) DHAMMAAN: Albaaniyaan lek (L) AMD: Dheelka Armenian (AMD) ANG: Netherlands Antillean guilder (ƒ) AOA: Angolan kwanza (Kz) ARS: peso Argentine ($) AUD: Dollarka Australia ($) AWG: Aruban florin (Afl.) AZN: Azerbaijani manat (AZN) BAM: Bosnia iyo Herzegovina sumadda la beddeli karo (KM) BBD: Doolarka reer Baqdaad ($) BDT: Bangladeshi taka (گوۋۇيۈەننىڭ) BGN: Bulgarian lev (лв.) BHD: Bahraini dinar (.د.ب) BIF: Burundian franc (Fr) BMD: Bermudian dollar ($) BND: Brunei dollar ($) BOB: Bolivian boliviano (Bs.) BRL: Real Brazilian (R $) BSD: Bahamian dollar ($) BTC: Bitcoin (฿) BTN: Bhutanese ngultrum (Nu.) BWP: Botswana pula (P) BYN: Belarusiyaanka ruble (Br) BZD: Doolarka doolar ($) CAD: Doolarka Kanada (C $) CDF: Kongo Kongo (Fr) CHF: Faransiiska Swiss (CHF) CLP: Chilean peso ($) CNY: yuan Shiine (¥) KOOB: Colombian peso ($) CRC: Costa Rican colón (₡) CUC: Puba la beddelan karo ($) CUP: Cuba peso ($) CVE: Cape Verdean escudo ($) CZK: Czech koruna (Kč) DJF: Jabuuti franc (Fr) DKK: krone deenish ah (DKK) DOP: Dominican peso (RD $) DZD: Algeria dinar (د.ج) EGP: Miisaanka Masar (EGP) ERN: Eritrean nakfa (Nfk) ETB: lacagta Ethiopia (Br) EUR: Euro (€) FJD: Fijian dollar ($) FKP: Qiimaha jasiiradaha Falkland (£) GBP: Lacagta Lacagta ah (£) GEL: Luriyada Georgian (₾) GGP: Guernsey rodol (£) GHS: Ghana cedi (₵) GIP: Gibraltar rodol (£) GMD: Gambian dalasi (D) GNF: Guinean franc (Fr) GTQ: Guatemalan Quetzal (Q) GYD: Guyanese dollar ($) HKD: Dollarka Hong Kong ($) HNL: Honduran lempira (L) HRK: Croatian Kuna (kn) HTG: Haitian gourde (G) HUF: Hungary forint (Feat) IDR: Rupiah Indonesian (Rp) ILS: sheqel cusub oo Israel ah (₪) IMP: Manx rodol (£) INR: Indian rupee (₹) IQD: dinar ciraaq (ع.د) IRR: Riyaale Iiraan (﷼) ISK: Icelandic króna (kr.) JEP: Jersey rodol (£) JMD: Jamaican dollar ($) JOD: Jordan dinar (د.ا) JPY: Japanese yen (¥) KES: shilinka Kenya (KSh) KGS: Kyrgyzstani som (сом) KHR: Cabbod Kaamboodiya (៛) KMF: Comorian franc (Fr) KPW: Waqooyiga Kuuriya ayaa ku guuleystay ($) KRW: South Korea ayaa ku guuleysatay ($) KWD: Kuwaiti dinar (d.ik) KYD: Cayman Islands dollar ($) KZT: Kazakhstani tenge (₸) LAK: Lao kip (₭) LBP: pound Lubnaan (ل.ل) LKR: Rupee Sri Lankan (රු) LRD: Liberian dollar ($) LSL: Lesotho loti (L) LYD: Liibaan dinar (ل.د) MAD: Moroccan dirham (د.م.) MDL: Moldovan leu (MDL) MGA: Malagasy ariary (Ar) MKD: Diidmada Makedoniya (ден) MMK: Burmese kyat (Ks) MNT: Mongolian tögrög (₮) MOP: Macanese pataca (P) MUR: Mauritian rupee (₨) MVR: Maldivian rufiyaa (.nu) MWK: Malawian kwacha (MK) MXN: Baaskiilada Meksika ($) MYR: Raajiciyaasha Malaysiya (RM) MZN: metrik (MT) NAD: Doolarka Namibiya (N $) NGN: naira naira (₦) NIO: Nicaraguan córdoba (C $) NOK: krone Norwegian (kr) NPR: Nepalese rupee (₨) NZD: Dollar New Zealand ($) OMR: Omani rial (ر.ع.) PAB: Balboa Panamaniin ah (B /.) PEN: Sol (S /) PGK: Papua New Guinean kina (K) PHP: Philippine peso ($) PKR: Pakistani rupee (₨) PLN: Polish złoty (zł) PYG: Paraguayan guaranteeí (₲) QAR: Qatari riyal (r.) RON: Romania leu (lei) RSD: Serbian dinar (рсд) RUB: Ruushka Ruushka RWF: Rwandan franc (Fr) SAR: Riyaale Sucuudi (r.S) SBD: Solomon Islands dollar ($) SCR: Seychellois rupee (₨) SDG: Suudaan Suudaan (ج.س.) SEK: Swedish krona (kr) SGD: Doolarka Singapore ($) SHP: Saint Helena rodol (£) SLL: Sierra leonon leone (Le) SOS: Lacagta shilin Soomaaliga (Sh) SRD: Doolarka Surinamese ($) SYP: rodol Syrian (ل.س) SZL: Swazi lilangeni (L) THB: Thai baht (฿) TJS: Tajikistani somoni (ЅМ) TMT: Hilibka Turkmenistan (m) TND: Tunisia dinar (د.ت) TOP: Tongan paʻanga (T $) Lacagta Turkish: Lire Turkish (₺) TTD: Trinidad iyo Tobago dollar ($) TWD: Dollar New Taiwan (NT $) TZS: Shilinka Tansaaniya (Sh) UAH: Yirriiska hryvnia (₴) UGX: Shilinka Ugaandha (UGX) USD: Maraykanka (US) dollar ($) UYU: peso Uruguayan ($) UZS: Uzbekistani som (UZS) VEF: Venezuelan bolívar (Bs F) VND: Fiktooriya đồng (₫) VUV: Vanuatu vatu (Vt) WST: Samoan tālā (T) XAF: Bartamaha Afrika CFA franc (CFA) XCD: dollarka bariga bariga ($) XOF: Galbeedka Afrika CFA franc (CFA) XPF: CFP franc (Fr) YER: Yemen rial (﷼) ZAR: Koonfur Afrika (R) ZMW: Zambian kwacha (ZK)